TürkHavacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) မှတီထွင်ခဲ့သော AKSUNGUR မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်အားခဲယမ်းမီးကျောက်များစတင်ခဲ့သည်။ ANKA စီမံကိန်းမှရရှိသောအတွေ့အကြုံနှင့်အတူ။ TÜBİTAKကာကွယ်ရေးစက်မှုလုပ်ငန်းသုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာဘာသာရပ် [ပို ... ]
ကျန်းမာရေး ၀ န်ကြီးဌာနသည်ဒေသဆိုင်ရာဆေးဝါးကုမ္ပဏီမှထုတ်လုပ်သောမူးယစ်ဆေးဝါးအား coronavirus (KOVID-19) ကုသရန်အတွက်ရောင်းချခွင့်ပြုခဲ့သည်။ သမ္မတဆက်သွယ်ရေးသမ္မတ Fahrettin Altun ၏တရားဝင်လူမှုမီဒီယာအကောင့် [ပို ... ]
ဂျာမနီတွင်လူမှုရေးကန့်သတ်ချက်များလျှော့ပေါ့လာပြီးနောက်ရက်အနည်းငယ်အကြာတွင် Corona ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုများတိုးလာခြင်းကြောင့်ရောဂါကူးစက်မှုသည်ထိန်းချုပ်မှုမှနောက်တဖန်ပြန်လည်ရရှိနိုင်မည့်စိုးရိမ်မှုများကိုပေါ်ပေါက်စေခဲ့သည်။ Robert Koch Disease Control Institute ၏နေ့စဉ်သတင်းလွှာတွင်၊ [ပို ... ]
Istanbul Airport Metro Project TBM ဥမင်ပြီးစီးမှုအခမ်းအနား
သမ္မတ Recep Tayyip Erdoğanက ၀ န်ဆောင်မှုပြိုင်ပွဲကိုနောက်ဆုံးရှူရှိုက်သည်အထိ ဆက်လက်၍ သွားမည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။ Erdogan သည် Gayrettepe-Kagithane Istanbul Airport Metro Project TBM ဥမင်ပြီးစီးမှုအခမ်းအနားကိုဗွီဒီယိုညီလာခံတစ်ခုသို့တက်ရောက်ခဲ့ပြီးမိန့်ခွန်းပြောကြားခဲ့သည်။ အာဒိုဂန်မိန့်ခွန်းမှ [ပို ... ]
သမ္မတAktaşကတ္တရာလုပ်သားများသည် Sahur ကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်
Bursa Metropolitan မြူနီစီပယ်သည် Corona ဗိုင်းရပ်စ်ဖြစ်ပွားမှုကြောင့်စနေ၊ တနင်္ဂနွေတွင်ညမထွက်ရအမိန့်ကိုအခွင့်အလမ်းများအဖြစ်ပြောင်းလဲခဲ့ပြီးနှစ်ပေါင်း ၁၅-၂၀ နှစ်အထိသက်တမ်းတိုးခြင်းမရှိသေးသောအဓိကသွေးလွှတ်ကြောများ၌ asphalting move များကိုအစပျိုးခဲ့ပြီး Acemler - Merinos အကြားအဆက်မပြတ်ဆက်လက်တည်ရှိသည်။ [ပို ... ]
တူရကီ AVM တဲ့အခါမှာငါယဉ်ကျေးမှုနှင့်တွေ့ဆုံရန်?
တူရကီဘို့ကုန်တိုက်ယဉ်ကျေးမှုပထမဦးဆုံး Galleria ကုန်တိုက်နှင့်အတူ 1987 ခုနှစ်တွင်စတင်ခဲ့သည်။ Capitol AVM ကို ၁၉၉၃ ခုနှစ်တွင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီးဆက်လက်လည်ပတ်ခဲ့သည်။ တူရကီနိုင်ငံ၏အကြီးဆုံးကုန်တိုက်ကြီးတွေဒီ 1993 AVM'si [ပို ... ]
coronavirus တိုက်ဖျက်ရေးနယ်ပယ်အတွင်း၌မနက်ဖြန်မှအချို့သောဒေသများတွင်ပုံမှန်အဆင့်များကိုပြုလုပ်နေသည်။ ဒီ၏အဓိကထင်ဟပ်အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်ကြုံတွေ့ခံရဖို့မျှော်မှန်းထားသည်။ အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအပေါ်ကန့်သတ်အားလုံးမေလ 11 ရက်တနင်္လာနေ့ဆက်လက်ကြောင့်ဖြစ်သည်။ [ပို ... ]
Grand Istanbul ဘတ်စ်ကားဂိတ်တွင်ပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းလုပ်ငန်းဆက်လက်လုပ်ဆောင်သည်
ညမထွက်ရအမိန့်ကိုကန့်သတ်ချက်များကြောင့် IMM သည်မြို့အနှံ့အပြားရှိရွေ့လျားမှုကိုဝန်ဆောင်မှုအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲပေးသည်။ ရာစုနှစ်၏နောက်ဆုံးသုံးလပတ်မှ စ၍ လျစ်လျူရှုခံထားရသော Greater Istanbul Bus Terminal တွင်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း၊ ပြင်ဆင်ခြင်းနှင့်အသစ်ပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်းများစတင်ခဲ့သည်။ [ပို ... ]
IMM မှမေလ ၁၁ ရက်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးသတိပေးချက်! လမ်းလျှောက်ခြင်းသို့မဟုတ်စက်ဘီးစီးခြင်း ဦး စားပေး
မေလ ၁၁ ရက်တနင်္လာနေ့တွင်စတင်မည်ဖြစ်သော Istanbul Metropolitan Municipality မှသတိပေးပြောကြားခဲ့သည်။ IMM သည်ပုဂ္ဂလိကပိုင်မော်တော်ယာဉ်များကိုအစ္စတန်ဘူလ်တွင်အသုံးပြုသည်။ သို့သော် ပို၍ အရေးကြီးသည်မှာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများစွာပြန်လည်လည်ပတ်နိုင်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ [ပို ... ]
TCDD Tasimacilik သည်အမြန်ရထားရထား (YHT) ၀ န်ဆောင်မှုများကိုပြန်လည်စတင်ရန်အသင်းနှင့်ပစ္စည်းကိရိယာပြင်ဆင်မှုပြီးစီးခဲ့ပြီး coronavirus ဖြစ်ပွားခြင်းကြောင့်ဆိုင်းငံ့ထားခဲ့သည်။ Habertürkမှသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်အခြေခံအဆောက်အအုံ ၀ န်ကြီးဌာနမှလက်မှတ်ထိုးရန်စောင့်ဆိုင်းနေသည် [ပို ... ]
Gendarmerie နှင့် Coast Guard ဝန်ထမ်းများသည်အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်အခမဲ့ဖြစ်သည်
အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ၀ န်ဆောင်မှုများကိုအခမဲ့အသုံးပြုခွင့်ကိုဆုံးဖြတ်သည့်ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုပြင်ဆင်ထားသည်။ ပြင်ဆင်ချက်အရအမျိုးသမီးများနှင့်ကမ်းခြေစောင့်တပ်ဖွဲ့ဝင်များသည်အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ၀ န်ဆောင်မှုများကိုအခမဲ့ရရှိမည်ဖြစ်သည်။ [ပို ... ]
İstanbul AVM 2020 အရေအတွက်
ယေဘုယျsürdüyအတွက်အစ္စတန်ဘူလ်, တူရကီအရှိဆုံး AVM'si နှင့်အတူမြို့ဖြစ်ခြင်း၏ဂုဏ်ထူး။ စုစုပေါင်း ၁၂၅ ယောက်ရှိသည်။ ၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင်အစ္စတန်ဘူလ်တွင်ဈေးဝယ်စင်တာအသစ်တစ်ခုဖွင့်လှစ်ရန်စီစဉ်ထားသည်။ ဤတွင် Istanbul ရှိထိပ်တန်းစျေး ၀ ယ်စင်တာ ၁၀ ခုဖြစ်သည် [ပို ... ]
မိခင်များနေ့တွင်ZübeydeHanımသတိရအောက်မေ့ပွဲ၌အောက်မေ့ဖွယ်အခမ်းအနားသို့တက်ရောက်ခဲ့သူ Izmir မြို့တော်စည်ပင်သာယာမှမြို့တော်ဝန်မြို့တော်ဝန်Tunç Soyer က "ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဟာအကြီးမြတ်ဆုံးမိခင်ရဲ့ ၀ ိညာဉ်ရေးရာရောက်ရှိနေပြီ" လို့ပြောပါတယ်။ တစ်နေ့သာမိခင်များကိုမှတ်မိရန်မလုံလောက်ကြောင်းအလေးပေးပြောကြား [ပို ... ]
Süleyman Karaman ကဘယ်သူလဲ။
Süleyman Karaman (၁၉၅၆၊ Refahiye၊ Alaçayırကျေးရွာ) သည်စက်မှုအင်ဂျင်နီယာတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး TCDD ၏အထွေထွေမန်နေဂျာလည်းဖြစ်သည်။ ပညာရေးဘဝ Erzincan ၌သူ၏ပညာရေးဘ ၀ စတင်ပြီးနောက်သူသည်အထက်တန်းပညာရေးအတွက် Istanbul Pertevniyal အထက်တန်းကျောင်းသို့သွားခဲ့သည်။ [ပို ... ]
တူရကီခုနှစ်တွင် 436 ကိုအပိုင်းပိုင်း Mall ကစုစုပေါင်းလက်ရှိတွင်ရှိပါတယ်။ စျေး ၀ ယ်စင်တာများသည်စီးပွားရေးအတွက်အထောက်အကူပြုသောစတုရန်းမီတာ ၁၃.၂ သန်းနှင့်ငှားရမ်းနိုင်သည်။ တစ်နေ့ပြီးတစ်နေ့ကြီးထွားလာနေသည့်ဈေးဝယ်စင်တာတွင် ၂၀၂၀ နှစ်ကုန်တွင်ပျမ်းမျှ ၄၄၅ ရှိသည်။ [ပို ... ]
Izmir Metropolitan မှစျေးဝယ်စင်တာများကိုတင်းတင်းကျပ်ကျပ်ကြီးကြပ်သည်။
Izmir Metropolitan Municipality သည် Coronavirus ဖြစ်ပွားမှုကြောင့်တဖြည်းဖြည်းလိုက်နာသင့်သည့်စည်းမျဉ်းများကိုမေလ ၁၁ ရက်နေ့တွင်တဖြည်းဖြည်းစတင်အသုံးပြုသွားမည်ဖြစ်သည်။ Metropolitan မြူနီစီပယ်ရဲရဲအဖွဲ့များကိုမေလ ၁၁ ရက်နေ့တွင်စတင်စစ်ဆေးမည်။ Izmir မြို့ပြ [ပို ... ]
နောက်ထပ် ၃၀၄ ဘတ်စ်ကား ESHOT ရေယာဉ်စုတွင်ပါဝင်ရန်
Izmir Metropolitan မြူနီစီပယ်သည်ဖို ၁၃၄ ခုနှင့်တစ်ကိုယ်တော် ၁၇၀ အပါအဝင်ဘတ်စ်ကား ၃၀၄ ကိုလေလံဆွဲသည်။ စာချုပ်ချုပ်ဆိုပြီးနောက်ကိုးလအတွင်းယာဉ်များကိုပို့ဆောင်ပေးပါမည်။ Izmir Metropolitan မြူနီစီပယ်, ဘတ်စ်ကားစင်းကို [ပို ... ]
İzmir Metropolitan မြူနီစီပယ်သည်ပြည်ထဲရေး ၀ န်ကြီးဌာန၏မြို့ပတ်ရထားနှင့်အညီမေလ ၁၁ ရက်တွင်ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်မည့်ဆံပင်ညှပ်နှင့်ဆံပင်ညှပ်သမားများအားတစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းရေးပံ့ပိုးမှုပေးလိမ့်မည်။ İzmir Metropolitan မြူနီစီပယ်ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့်ထိန်းချုပ်ရေးဌာနခွဲညွှန်ကြားမှုအဖွဲ့များသည်တစ် ဦး ကိုတစ် ဦး စျေး ၀ ယ်သည် [ပို ... ]
MEB မှ 'Covid-19' နှိမ်နင်းရာတွင်ကျောင်းသားနှင့်မိဘများ ၁၂.၅ သန်းအတွက်လမ်းညွှန်ဝန်ဆောင်မှု
အဆိုပါ coronavirus ကာလအတွင်းစုစုပေါင်း 1,5 သန်း 12 ကျောင်းသားများနှင့်မိဘများ 500 လကာလအတွင်းလမ်းညွှန်မှုပေးခဲ့သည်။ အမျိုးသားပညာရေး ၀ န်ကြီး Ziya Selçukက“ ဒီလိုပြည့်စုံတဲ့လမ်းညွှန်ဝန်ဆောင်မှုကိုပေးတာက [ပို ... ]
ယခုနှစ်တွင်နို့ထုတ်လုပ်သူများအားပေးမည့်နို့မှုန့်အထောက်အပံ့နှင့်နို့ဈေးကွက်၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်ပတ်သက်သည့်ပြtheနာများကိုဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ သမ္မတ၏နို့မှုန့်ထောက်ပံ့မှုနှင့်နို့ထွက်ပစ္စည်းစျေးကွက်အားထိန်းညှိခြင်းဆိုင်ရာဆုံးဖြတ်ချက်အား ၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင်ပြုလုပ်မည် [ပို ... ]
အလယ်အလတ်အဆင့်ဒုတိယအဆင့်မောင်းသူမဲ့မြေယာစီမံကိန်းစာချုပ်ကိုသမ္မတကာကွယ်ရေးစက်မှုလုပ်ငန်းဥက္ကid္ဌ (SSB) နှင့် ASELSAN တို့အကြားလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်။ သမ္မတကာကွယ်ရေးစက်မှုလုပ်ငန်းဥက္ကIndustry္ဌ။ ဒေါက်တာ mailsmail Demir:“ စက်ရုပ်အကူများMehmetçiကိုလာနေကြပြီ။ [ပို ... ]
Pandemic Period Railways ကို Pekcan မှထိရောက်စွာအသုံးပြုသင့်သည်
ကုန်သွယ်ရေးဝန်ကြီး Ruhsar Pekcan က ၁၃ ကြိမ်မြောက်အကြံပေးဘုတ်အဖွဲ့အစည်းအဝေးကိုဗီဒီယိုဆွေးနွေးခြင်းဖြင့်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ Pekcan အပြင်; TİMသမ္မတİsmailGülle, DEİKဥက္ကİ္ဌ Nail Olpak, TOBB ဥက္ကR္ဌ Rifat Hisarcıklıoğlu, [ပို ... ]
တူရကီမိတ်ဆက်ကျန်းမာရေးခရီးသွားလုပ်ငန်း Certification Program
ယဉ်ကျေးမှုနှင့်ခရီးသွားလာရေး ၀ န်ကြီးဌာနသည်ကျန်းမာရေးခရီးသွားလက်မှတ်အသိအမှတ်ပြုအစီအစဉ်ကို ၂ ဝ ၂၀ ခုနှစ်နွေရာသီရာသီမှစတင်မည်ဖြစ်သည်။ ၀ န်ကြီးဌာန၏ ဦး ဆောင်မှုအောက်တွင်ကျန်းမာရေး၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၊ ပြည်ထဲရေးနှင့်နိုင်ငံခြားရေး ၀ န်ကြီးဌာနများ၏ထည့် ၀ င်မှုများနှင့်ကဏ္ sector တစ်ခုလုံး၏ပူးပေါင်းပါဝင်မှုနှင့်အတူ။ [ပို ... ]
ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားလုပ်ငန်းတွင် Galata တာ ၀ န်ပိုမိုတန်ဖိုးရှိသည့်whereရိယာကိုတည်ဆောက်ရန်နှင့်ယဉ်ကျေးမှုနှင့်အနုပညာလှုပ်ရှားမှုများ၏အစပြုရန် ရည်ရွယ်၍ ယဉ်ကျေးမှုနှင့်ခရီးသွားလာရေး ၀ န်ကြီးဌာနမှပြင်ဆင်ခဲ့သောBeyoğluယဉ်ကျေးမှုလမ်းစီမံကိန်းတွင်လေ့လာမှုများကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ [ပို ... ]
Bursa မှာယာဉ်ကြောသိပ်သည်းမှုကြောင့်နှစ်ပေါင်းများစွာထိန်းသိမ်းထားခြင်းမရှိသောအိမ်တွေဟာညမထွက်ရအမိန့်ကြောင့်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ပြီးခဲ့သည့်အပတ်က Merinos - Acemler ဦး တည်ချက်၏ကတ္တရာကိုသက်တမ်းတိုးခဲ့သော Bursa Metropolitan Municipality, ယခုအတူတူပင်ဖြစ်ပါသည် [ပို ... ]